Askarigii dilay George Floyd oo damiin qaali ah lagusii daayey | Gaaroodi News
Askarigii dilay George Floyd oo damiin qaali ah lagusii daayey
October 8, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Derek Chauvin, ayaa ahaan xor illaa inta laga gaadhayo maxkamadaynta danbe
Sarkaalkii hore ee booliska Mareykanka ee loo haystay dilka ninkii madowga ahaa ee aan hubeysneyn George Floyd ayaa lagaga sii daayay xabsiga qaab damiin ah.
Derek Chauvin ayaa soo dhigay $ 1m (£ 774,000) oo dammaanad ah waxaana la sii daayay subaxnimadii Arbacada, sida uu muujinayo diiwaanka maxkamaddu.
Sarkaalkan caddaanka ah ayaa laga duubey isaga oo jilibkiisa qoorta kaga haya Mr Floyd muddo ku dhow sideed daqiiqo ah, ka hor inta uusan dhiman 25 May.
Dhimashada Mr Floyd waxay horseedday muddaaharaadyo caalami ah iyo baaqyo ku saabsan dib-u-habeyn dhanka bilayska ah, oo ka dhashay dhaqdhaqaaqii Nolosha Dadka Madow waa Mudan.
Mr Chauvin ayaa laga caydhiyay shaqadiisa waxa uuna hadda sugayaa maxkamad bisha Maarso ee sannadka soo socda iyadoo lagu eedeenayo dil labaad iyo dil badheedh ah. Seddexdii sarkaal ee kale – J Alexander Kueng, Thomas Lane iyo Tou Thao – ayaa sidoo kale shaqada laga caydhiyay waxaana lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen dilkaasi.
Dhammaan afartan sarkaal ee loo haysto dilka Mr Floyd oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa hadda la soo damiintay, waana xor ilaa laga gaadhayo maxkamadeyntooda danbe sannadka soo socda.
Chauvin wuxuu ku jiray xabsiga ugu amniga badan ee Oak Park Heights, Minnesota, tan iyo dabayaaqadii bishii May.
Bishii Juun, garsooraha ayaa dhigay dammaanad ah $ 1.25m oo aan lahayn wax shuruud ah, ama $ 1m oo ay ku jiraan shuruudo ay ka mid yihiin Mr Chauvin in aanu la xidhiidhin qoyska Mr Floyd, dhiibistiisa qorigiisa oo uusan ka shaqeyn karin waaxaha sharci fulinta ama amniga maadaama uu maxkamad sugayo.
Mr Chauvin, damaanaddiisa ayaa tan shuruudda leh, taasoo diiwaanka maxkamada ay muujisay inay u dammaanad qaadday wakaalad ka shaqaysa damiin qaadidda, sida ay soo tebisay warbaahinta CBS Minnesota.
Mareykanka gudahiisa, wakiillada damaanad-qaadayaasha ah aa ayaa kuu ballan qaadaya inay siiyaan mas’uuliyiinta qaddarka dammiin buuxa ee looga baahan yahay deysanayaasha haddii aysan awoodin inay sidaas sameeyaan ama ay ku fashilmaan inay ka soo muuqdaan maxkamadda.
Ka bilaw koonha bidix: Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane iyo J Alexander Kueng
Mr Chauvin ayaa laga sii daayay xabsiga wax yar ka hor 11:30 waqtiga maxalliga ah (17:30 GMT) Arbacadii, sida laga soo xigtay Xafiiska Sheriff County Hennepin.
Ben Crump, oo ah qareen u dooda xuquuqda madaniga ah oo matalayay qoyska Mr Floyd, ayaa sheegay in siidaynta Mr Chauvin ay ahayd “xusuusin xanuun badan” sida oo kalena “wali ay ka fog yihiin inay cadaalad u helaan George”.
“In kasta oo George Floyd loo diiday inuu caddaalad ku helo nolosha, haddana ma nasan doonno illaa iyo inta uu ka helayo caddaalad buuxda kaddib geeridiisa, “ayuu yidhi Mr Crump.
Xilligan, dhammaan afarta sarkaal ee la eedeeyay waxaa loo qorsheeyay inay si wada jir ah u wajahaan maxkamad bisha Maarso, laakiin qaaddiga ayaa ka fiirsanaya inuu si goonni goonni ah u maxkamadeeyo.
Dhacdadan dacwad oogisteeda ayaa muujisay nabarro qoto dheer oo ka dhashay sinnaan la’aanta jinsiyadeed ee Mareykanka.
Banaanbaxyadii Nolosha Madow waa Mudan – oo qaarkood rabshado isu rogeen – waxay noqdeen arrimo siyaasadeed oo muhiim ah xilligan loo diyaargaroobayo doorashada madaxweynenimo ee bisha Nofeembar ka dhici doonta Mareykanka
Hoggaanka Xisbiga KULMIYE Oo Aqbalay Murashaxnimada Yaxye Cabdillaahi Araarse
” Musharaxiinta Kulmiye Kasoo Cadhooda Anigaa Iska Leh ” Gudoomiye Faysal Cali Waraabe
” Guurtidu Cimri Tagay Ceeb Kusagootiyi Maayaan ” Cabdilaahi Jawaan
Dab Khasaare Gaadhsiiyay 48 Beerood Oo Kuyaala Deegaanka Goada Wayn + Muuqaal
Haayada ARC Oo Mashaariic Kafulisay Gudaha Magaalada Hargeisa